विदेशमा सिकेको ज्ञान र सिप भित्र्याउन सके मात्र देश समृद्ध बन्छ : डा. बद्री केसी, अध्यक्ष (प्रत्यासी), एनआरएनए « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
१२ भाद्र २०७८, शनिबार १२ : ०२ बेलुका
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को महाधिवेश अक्टोबर २३ देखि २५ सम्म हुन गइरहेको छ। अनलाइन भोटिंगबाट निर्वाचन हुने भएको छ। त्यसकारण यो महाधिवेशनले धेरै उत्साह थपेको छ। एनआरएनएमा रहेर विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको हक हितका लागि आवाज उठाउँदै आएका डा। बद्री केसी संघको अध्यक्षको उम्मेद्वारी हुन्। संघका उपाध्यक्ष तथा वैदेशिक रोजगार तथा कल्याकारी विभागका प्रमुख समेत रहेका डा। केसी विगत ३१ वर्षदेखि रसियामा बस्दै आएका छन्। डा. केसीले सुरुवातीकालदेखि नै विदेशमा बस्ने नेपालीहरुका लागि काम गरिरहेका छन्। अब हुने एनआरएनएको महाधिवेशमा उनको उम्मेद्वारी तथा आगामी योजनाकाबारेमा गरिएको कुराकानीको अंशः
यस्तै, म कोषाध्यक्ष भएर काम गर्नु भन्दा पहिले केन्द्रीय सदस्य भएर काम गर्दा संस्थामा ४०,४५ वटा मात्र देशहरु थिए। त्यसपछि म महासचिव भएर काम गर्दा कमसेकम ३० वटा नयाँ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् खुल्यो। यसरी म महासचिव हुँदा कसरी धेरै भन्दा धेरै देश तथा नेपालीहरुलाई आबद्ध गर्ने भन्नेमा विषयमा मेरो ठूलो योगदान रह्यो। सुरुमा हाम्रा साधारण सदस्यहरु कम थिए।
अहिले १ लाख १० हजार साधारण सदस्यहरु मात्र छन्। म महासचिव हुँदा म लगाएत मेरो टिमले एकदम उत्कृष्ट काम गरेको छ। वैदेशिक रोजगारमा केके समस्या छन् भनेर हामीले एक हप्ता अघि मात्र श्वेत पत्र जारी गरेका छौं। अब अर्को उपाध्यक्ष आउँदा अलमल हुनु पर्दैन। यी आठ वटै विभाग, ४० वटा कमिटीहरु र ८४ वटा देशहरुलाई म कन्ट्रोल गर्न सक्छु। र, ती देशहरुमा बसेका नेपालीहरु पहिले आफैं सक्षम हुनुपर्छ अनि नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ यी सबै कुराहरुलाई व्यवस्थापन गरेर म लैजान सक्छु भनेरै मैले अध्यक्ष पदको लागि आँट गरेको छु। साथीहरुले मलाई जिताउनुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
प्रकाशित : १२ भाद्र २०७८, शनिबार
‘टेकु अस्पताललाई सरुवा रोग एकेडेमीको रुपमा विकास गर्ने योजना छ’